काठमाडौँ । पाल्पाबाट काठमाडौं छिरेको एक गाउँले केटोेले नेपालको गभर्नर बन्छु र नोटमा हस्ताक्षर गर्छु भन्ने सपना देखेको थिएन । तर समयले बनाइदियो । “जिन्दगीमा जहाँ जहाँ काम गरेँ, एउटा मानक नै स्थापित गरेँ भन्ने लाग्छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल बनाउन लागेँ । आज मेरो विरोध गर्नेहरु भोलि त्यतिबेला राम्रो भएछ भन्ने अवस्थामा पक्का पुग्नेछन् ” भने धेरैजसो भावुक हुदै डा चिरञ्जीवी नेपालले भने । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा आजैबाट अवकास हुदै हुदैछन् । त्यसैले पनि अघिपछिको तुलनामा आजको भावुकता बढी नै देखिएको थियो ।
उनले भने “गभर्नर बन्छु र नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउँछु भन्ने त लागेकै थिएन ।” आज नेपालको बजारमा उनले नै हस्ताक्षर गरेका रु पाँच खर्ब बराबरको नोट चलनचल्तीमा छन् । नोटमा हस्ताक्षर गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो भन्नेदेखि पाँच वर्षको अवधिमा भए गरेका कामको बारेमा उहाँले हामीसँग लामो कुराकानी गरे । “जीवनमा प्राप्त भएको सफलताका पछाडि ठूलो मेहनत र लगनले नै काम ग¥यो । गभर्नरको रुपमा रहँदा अनेकन दबाव आए, अनेकन् लाञ्छना पनि लागे, नकारात्मक प्रवृत्तिसँग पनि जुध्नुप¥यो” डा नेपालले भने ।
नागरिकको निक्षेप सुरक्षित गर्ने सवालमा होस वा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विषयमा नै डा।नेपाल आफू सतीसाल जस्तै अडिग रहेको बताउँछन् । मैले लोभ गरिन, कानूनले दिएको सबै अधिकार प्रयोग गरेँ, आफूलाई केहीले निरंकुश भनेपनि आफैले हस्ताक्षर गरेर जनतामा पठाएको विश्वासरुपी नोटको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सम्झेर काम गरेको फेहरिस्त सुनाए उनले ।
गभर्नर भएर गए पनि मलाई त्यतिधेरै जिम्मेवारी महसुस त भएको थिएन, तर जुन दिन मैले नोटमा हस्ताक्षर गरेँ, त्यो दिनदेखि भने मनमा एक प्रकारको गौरव र जिम्मेवारीको महसुस भयो, नेपालले भने “भित्र भित्रै जिम्मेवारी पनि बढेको महसुस भयो ।” यसले उहाँलाई आफूले नागरिकको विश्वासमाथि हस्ताक्षर गरेजस्तो लागेको अनुभव भयो रे ।
आफ्नो जीवनमा कतिको सफल भए भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कुनै निमेष नै खर्च नगरी उत्साहित हुँदै उहाँले जवाफ दिए “म आफूलाई सफल नै ठान्छु ।”
भूकम्प गयो, नाकाबन्दी भयो । पूरानो संविधान अनुसार उहाँको नियुक्ति भएको थियो । नयाँ संविधान आयो । के गर्ने, के नगर्ने भन्ने दुविधा थियो । भूकम्पबाट त्राही त्राही भएका नागरिकलाई सरकारले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सकेको थिएन । तर, डा।नेपालको नेतृत्वमा एउटा दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषण गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुन्य प्रतिशत व्याजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउने र दुई प्रतिशत व्याज लिएरु रु १५ लाख र २५ लाख ऋण दिएर घर बनाउने ।
सो घोषणा आम नागरिकका लागि मरुभूमिमा पानी पाए जस्तै भएको थियो । जनताप्रतिको दायित्व सम्झेर घोषणा गरिएको सो प्याकेजलाई लिएर केहीले आलोचना पनि गरे । सरकार भन्दा ठूलो राष्ट्र बैंक हो र ? समेत भने । तर, जनताका लागि पवित्र उद्देश्य राखेर गरिएको निर्णयलाई लिएर कति मन्त्री त डा नेपालसँग रिसाए पनि । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गभर्नर साप जे घोषणा गरे, त्यो राम्रो भयो भनेर दिएको ढाडसले नै काम गर्ने वातावरण बन्यो । एक हजार ५०० बढीले त्यस्तो सुविधा लिएका छन् ।
कार्यकाल भरी पाँच वटा अर्थमन्त्री, पाँच वटा प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको विवरण सुनाउनुहुन्छ नेपाल । व्यक्तिगत स्वभाव तथा काम गर्ने शैली हरेकका फरक फरक हुन्छ । त्यसलाई सन्तुलन मिलाउन पनि ठूलै क्षमता चाहिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि देशलाई केही गराँै भन्ने भावना रहेको आफूले पाएको बताउँछन् डा नेपाल ।
ती दिन सम्झदै नेपाल भन्छन् “मलाई यति दबाव प¥यो, कि भनी साध्ये छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले त मलाई बोलाएर आएको पैसा रोक्ने काम गर्नु हुँदैन, जति आएको छ आउन दिनुपर्छ समेत भनेको स्मरण गर्छन् ।
“किन नगर्ने भन्ने भयो, नीति ल्याउन सकियो भने कार्यावयन गर्न सक्छु भन्ने भयो” उहाँले थप्नुभयो “जुनसुकै संस्थामा जाँदा म यो गर्छु भनेर जान्छ नै । आफू प्रष्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि अरुलाई पनि विश्वासमा लिन सकिन्छ ।” बैंकको अनुसन्धानको विभागसँग पनि सल्लाह गरियो । डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, महाप्रसाद अधिकारी । उहाँले पनि लौ, गरीहालौँ समय यही हो भने र हामीले पूँजी वृद्धिको योजना ल्यायौ ।
डा नेपाल भगर्नर भएर जाँदा १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा थिए । “बैंकका कर्मचारी आफै अनुमतिपत्र दिने, आफै समस्या ग्रस्त घोषणा गरेर आफै गएर बस्न हुँदैन, त्ससले राम्रो सन्देश दिँदैन” भन्ने तथ्य स्थापित गरेको बताउँछन् नेपाल । उहाँको स्पष्ट सोच र निर्देशन थियो – समस्याग्रस्त हुनै नदिने, त्यसलाई उपाय लगाएर समाधान गर्ने तर केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी नै जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
डा नेपाल राष्ट्र बैंकको क्याडर नभएका कारण पनि बैंक कसरी चलाउँछ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा थियो । भन्छन् “मलाई लाभ के भयो भने त्यसअघि मैले नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । सो संस्थामा बसेर दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसले मलाई वित्तीय क्षेत्रको राम्रो अनुभव दिएको थियो ।”
डा।नेपालले मौद्रिक नीति मार्फत नै बिग मर्जरको बहस छेड्नुभयो । नेपालमा कूल ६१ प्रतिशत बराबर वित्तीय साक्षरता पुगेको अवस्था छ । लघुवित्तको समेत जोड्दा झण्डै ७५ प्रतिशत पुगेको छ । कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६ वटा मात्रै वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्न बाँकी छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंक गाभियो । यो निर्णय गभर्नर नेपालको कार्यकालको शुरुवाती बिग मर्जर हो । अरु बैंकहरु पनि प्रक्रियामा छन् । डा नेपाल भन्छन् “मेरो कार्यकालमा बिऊ रोपिएको छ । यो क्रमशः फस्टाउँदै जान्छ ।” गाभ्ने प्रक्रियालाई तिव्रता दिएर १५ वटामा झार्न सकियो भने वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ भन्ने सोचका साथ काम भएको बताउँछन् नेपाल । उनकै कार्यकालमा १८५ बैंक वित्तीय संस्थाको दर्ता खारेज भएर ४५ मा आए ।
मौद्रिक नीतिमा अलि बढी कडा प्रवाधान राख्न खोज्नुभएको थियो डा नेपालले । तर, गभर्नरले मात्रै गर्ने अवस्था थिएन । तर शुरुवात भएको छ, यसले सफलता पाउनेमा ढुक्क छन् उनी । विगतमा वित्तीय साक्षरता मात्रै १५ प्रतिशत मात्रै थियो । जनताको पुहँचमा बैंक थिएनन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा ९ हजार ६०० जति पुगेको छ ।
अमेरिकामा समेत मर्जर शुरु भएको छ । साइबर सेक्युरिटीका कारण पनि अब संस्था कम हुुपर्छ भन्ने सोच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै शुरु भएको छ । तपाई संख्या नै तोक्न चाहनुहुन्थ्यो त्यसो भए ? उनले भने “हो, नामै तोकेर नै वर्क आउट भएको थियो । राम्रो नराम्रो बैंकको सबै रेकर्ड त आखिर हामीसँग नै थियो ।”
गभर्नरहरुको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन इन्डोनेसिया जाँदा विदेशी गभर्नरहरुले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई शपथ गराउने कार्यक्रम आ– आफ्नो देशमा रहेको बताए । त्यो सुनेर डा नेपालले अचम्म माने । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनताको हो । कूल ९२ प्रतिशत जनताको लगानी हुन्छ । तर, बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज्यप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने भन्ने त भएन । गभर्नरहरुको सम्मेलनबाट फर्किएपछि डा नेपालले डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरे ।
जनताको पैसा चलाउने, तर राष्ट्र बैंकलाई नै तीन चार महिना पछि मात्रै बैंकको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को भयो भन्ने थाहा हुने अवस्था थियो । विदेशी गभर्नरले सोधे रे, डा नेपाललाई । तपाईको देशमा त्यस्तो प्रबन्ध छैन । उनी भन्छन्“ हाम्रोमा व्यवस्था नै थिएन । म चुप लागेर बसेँ । बदनाम नै हुन्छ जस्तो लाग्यो । हुँदा हुँदा भारत, बंगलादेशकाले समेत सोधे । मैले छ पनि भनिन, छैन पनि भनिन ।” सो कुरा सुनेर आएपछि बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकले शपथ ग्रहण गर्ने प्रावधान शुरु गरिएको बताउँछन् नेपाल ।
“जनताको पैसा भएको बैंकमा समेत मेरो अधिकार हो भनेर मुद्दा हाल्दै हिड्ने ? यो त हुँदै भएन” डा नेपाल भन्छन् “सरकारी जागिर खाने पनि तोकिएको समयमा अवकाश हुन्छ । भारतमा समेत सिइओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकिएको छ । हाम्रोमा लागू गर्न खोज्दा अटेर गर्ने अवस्था आयो ।”
व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न गलत काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास नै भएको छ । केन्द्रीय बैंकलाई गर्न नहुने काम समेत गराउन खोज्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । डुब्न लागेको बैंकलाई कारवाही नगर भन्ने अवस्था पनि देखियो । कहिले काही राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सहयोग पु¥याएको गुनासो गर्छन्, डा नेपाल ।
राजनीतिक रुपमा कसैको स्वार्थमा काम गर्ने गभर्नर भयो भने संस्थाको गरिमा नै धरमराउने उनको भनाइ छ । संसारभर नै सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच स्वायत्तताको विवाद हुने गरेको छ । भारतमा पनि तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले राजीनामा नै दिए ।
यसअघिका गभर्नर डा युवराज खतिवडा हाल अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अब आउने गभर्नरको चुनौती के छ रु हाम्रो अर्को प्रश्न थियो । उनले भने,“फिनटेकको बेलामा बैंकिङ सुरक्षाको विषय नै, प्रमुख हो । त्यसलाई नै ध्यान दिनुपर्छ ।” बैंकिङ सुरक्षामा संसारभर नै जोखिम देखा परेको छ । त्यो अमेरिका यूरोपमा पनि छ । केन्द्रीय बैंकले साइबर सेक्युरिटीमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
कुराको बिट मार्ने क्रममा पुग्दै गर्दा हाम्रो अर्को जिज्ञासा थियो, डा नेपाललाई । आफ्नो कार्यकालमा गर्न नपाएको विषय के रह््यो ? उनले भने, “मैले गर्न नसेकेको नेसनल स्वीच गेटवे हो । प्रक्रिया भने शुरु भएको छ ।” त्यो काम भएको भए कहाँबाट के कति पैसा के कसरी गयो, आयो भन्ने रेकर्ड राख्न सहज हुन्थ्यो । त्यो देशका लागि अपरिहार्य रहेको छ ।
बैंकको थापाथलीको भवन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा आधुनिक भवन बनेको छ । रु चार अर्ब लागत हो त्यो भवनको । पूरानो दरबार भत्काउन लागिएको भन्दै रोक्न पनि खोजियो । डा नेपालले भने “ म आफै बुल्डोजरको चालक लिएर गएर भत्काएको हो । भन्नुपर्ने निकायलाई म भन्छु भनेर नै काम गरेँ ।”
बालुवाटारको भवनको ठेकेदार छनौटदेखि नै विवाद भयो जसका कारण ६ महिना ढिला भयो । भूइँतल्ला निर्माण भइसकेको छ । नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय शम्शेर जबराको पदचापलाई पछ्याउँदै सफलताको इतिहास बनाएर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरागरी निस्किन लागेका डा नेपाललाई हाम्रो अन्तिम प्रश्न थियो– अब के गर्नुहुन्छ ? राजनीति ? उनले भने,“तत्काल सोचेको छैन । आगामी दिनले के भन्छ । त्यही अनुसार नै होला ।”